Manafatra sary sy maodely 3D avy amin'ny Google Earth - Geofumadas
Ampidiro ny sary sy modelin'i 3D avy amin'ny Google Earth
May, 2011 Google Earth / Maps, Microstation-Bentley, topografia
Ny Microstation, avy amin'ny kinova 8.9 (XM) dia mitondra andian-java-miasa mifandraika amin'ny Google Earth. Amin'ity tranga ity dia te-hijery ny fanafarana ny maodely telo refy sy ny sariny aho, zavatra mitovy amin'ny zavatra ataony AutoCAD Civil 3D.
Ireo asa ireo dia ampidirina amin'ny:
na raha misy amin'ny teny Espaniola ny Microstation, izay sarotra ampiasaina amin'ny fampiharana:
Ity dia singa iray amin'ny sehatra rehetra mihazakazaka amin'ny Microstation, toy ny PowerCivil, Bentley Map, Bentley Coax, sns. Ny sary masina fahenina sy fahafito dia miasa, ny iray hampifanaraka ny fomba fijerin'ny Google Earth mifototra amin'ilay iray ananantsika ao amin'ny Microstation ary ny iray kosa hiodina. Ny kisary fahefatra dia ny hitondra ny sarin'i Google amin'ny sarintany.
1. Ny dgn file
Mba hanombohana, io asa io dia mitaky fa ny dgn dia 3D, raha toa ka manana rakitra napetraka miaraka amin'ny voa 2D isika, inona no tokony hatao:
File> fanondranana> 3D
Avy eo dia sokafanay ny rakitra izay efa natondranay. Ny endri-javatra hafa tsy maintsy ananana dia rafitra fanovozan-kevitra jeografika. Niova kely izy io taorian'ny Microstation 8.5, saingy amin'ny ankapobeny dia manaiky ny rafitra voatondro miaraka amin'ireo kinova ireo na dia indraindray aza dia manonona fotsiny hoe rafitra UTM fa tsy mamaritra ny faritra. Raha tsy manana ianao dia vita ny fampiasana ny kisary voalohany amin'ny fisotroana izay nasehoko teo am-piandohan'ny lahatsoratra ary nifidy ny rafitra mahaliana antsika ao amin'ny tranomboky. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy manome rafitra vinavina (avaratra atsinanana, atsinanana ...) isika ary mifidy ny safidy World (UTM) miaraka amin'ny datum WGS84, satria io no rafitra ampiasain'ny Google Earth.
Raha tsy mitolona be loatra ianao, dia azonao atao ny manendry ny rafitra ho an'ny fialam-boly ary tsy tokony hitady ny fotoana rehetra ilahantsika azy.
Raha ny momba ny Google Earth dia mora ny manafina ny tondroavaratra, ny bara misy ny tsipika, ny takelaka na ireo singa hafa tsy mahaliana antsika. Azo atao ihany koa amin'ny safidin'ny sary nalaina izay avy amin'ny Google Earth 5, namono ny fandrakofana an-taonany izay tsy liana aminay, matetika ireo tsy dia fahita firy. Vantany vao vonona isika dia tsy maintsy misafidy ny faritra mahaliana ary mampifandray ny Google Earth sy ny Microstation.
Misy tontonana iray izay manome antsika configurations sasantsasany, saingy amin'ny fampiharana azy ireo dia tsy dia ilaina loatra izy ireo satria ny rafitra referansa mitsangana ampiasain'ny Google Earth dia notsorina, miaraka amin'ireo faningana sasany any amin'ny faritra sasany any Etazonia sy Puerto Rico. Ka tsy misy dikany firy ny mifidy ny fiviliana amin'ny haavon'ny toerana avo; Ny zava-dehibe eto dia ny famaritana raha ho avy ny triangulated harato na ny takelaka Ny safidy "view terrain" dia tsy maintsy mavitrika hatrany.
2. Afindrao ny sary
Raha manafatra ny sary dia mila misafidy fotsiny ny bokotra fahefatra amin'ny bara ianao ary tsindrio ny efijery. Vokatr'izany dia hahazo ilay reticle voasambotra isika.
Mba hahitana ilay sary dia manao: Fitaovana> manome> Hijery, ary amin'io no ahitantsika tontonana izay nanapahantsika hevitra sasany momba ny karazana rindrankajy, fisehoana an-tsary sy famirapiratry ny sary.
Mba hahitana ny maodely amin'ny isometrika, dia ataontsika amin'ny fitaovana izay eo amin'ny Hijery, ary mametraka fantsana isometrika isika ary ahodinantsika malalaka izany. Jereo fa azo atao aza ny manome faritra voafefy fotsiny fefy na faritra miorina amin'ny zavatra iray. Ary raha misafidy ny safidy isika Stereo, afaka mahita ny asa miaraka amin'ny loko stereoscopique -amin'ireo izay manadino ny miverina rehefa miala amin'ny sinema-. Ny tontonana izay asehoko etsy ambany dia samy hafa kely arak'ilay fampiharana, satria amin'ity tranga ity dia ampiasaiko PowerCivil izay manana safidy maromaro kokoa.
Ny sary dia tonga amin'ny maitso maitso ary ny hatsaran-tarehy dia tsy misy latsa-danja noho ny antony print sreen; mihatsara rehefa mampiasa ny kinova Google Pro ary mitazona ny Google Earth amin'ny maody DirectX. Raha ny maodely nomerika dia tsy azo hatsaraina mihoatra ny atolotry ny Google izy io, na izany aza dia toa fomba azo ampiharina amin'ny asa mifameno miaraka amin'ny StitchMaps, izay ahafahanao maka sary maimaim-poana kokoa Amin'izany dia afaka manova hevitra ianao.
Na dia aseho aza fa maka sary izy io satria modely nomerika fa tsy sary, isaky ny misy fanovana iray atao amin'ny rindrankajy, dia sary iray ihany no mamorona ao amin'io lahatahaka io, izay azo alaina miaraka amin'ny mpitantana raster.
Manazava ny fisalasalana roa: ny tranobe 3D dia tsy tafiditra ao, satria tsy ao anatin'ny maodely nomerika ary ny fanatsarana ny maodely dia azo hatsaraina amin'ny fanaovana sary kely kokoa. Raiso ny ohatr'i San Sebastián, izay mirary ny kalitaon'ny fampahalalana; eo ankavanana dia nitifitra mitovy amin'ny ambaratonga zoom.
Hatreto, PlexEarth Ny famindram-po dia raisina ho fitaovana fampifandraisana tsara indrindra eo amin'ny Google Earth sy ny sehatra CAD.
Previous Post«Previous Google Earth; fanohanana ara-maso ho an'ny mpanao cartographers
Next Post Fotoana tsara ho an'ny AutoCAD 2013manaraka »
5 valiny "Manafatra sary sy maodely 3D avy amin'ny Google Earth"
Aogositra, 2011 at
Mba hangatahana fanandramana fanombatombanana, mifandray Jesus.Zenteno@bentley.com izay solontenan'i Amerika Afovoany sy Meksika.
Ao amin'ny tranonkala dia misy mailaka amin'ny contact.
Ringmaster hoy izy:
Tiako ny PROGRAMA URGENT izay misoratra anarana ary maka ny download
Jona, 2011 ao
Mazava ho azy fa tsy malalaka izany.
Raha manoratra ao amin'ny serivisy SELECT ianao dia azo atao ny mangataka famandrihana fitsarana, raha toa ka mihatra ny mombamomba anao.
Mey, 2011 ao
Aiza no ahafahako maka ity fitaovana ity hampiasaina amin'ny googleEart